batari New smartphone qaadi karaan si ay u 48% shan daqiiqo - Rule News
batari New smartphone qaadi karaan si ay u 48% shan daqiiqo
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “batari New smartphone qaadi karaan si ay u 48% shan daqiiqo” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Monday 16 November 2015 14.44 UTC
batari A smartphone in raagto in ka badan maalintii waxaa laga yaabaa in soo baxay gaari karin dadka ugu badan ee xilligan, laakiin mid ka weyn in eedeeyo in ay 48% shan daqiiqo waa ay jidka ku.
batari cusub soomi-ku amraya Huawei ee waa awood ku amraya 10 jeer ka dhakhsi badan in bateriga ra'iyi lithium caadi adeegsanaya design a koronto cusub, sida laga soo xigtay shirkadda.
baytariyada ayaa ee ay soo Lab Watt leedahay Huawei, oo waxaa lagu muujiyey at Battery ka Dood Cilmiyeed 56aad ee Japan isbuucii hore.
Quick amraya bandhig batari 3,000mAh.
The baytariyo cusub Hannaan ka dhisay galay anode in dadajiyaa beddelidda ee tamarta korontada ka Roobka galay tamarta kiimikada aan yaraynta nolosha batteriga ama yaraynta xaddiga tamarta ay u keydiso.
Laba nooc oo ah baytariyada ahaayeen on show. Mid ka mid ah 3,000 milliampere-saac (Mah) batari in lagugu soo oogi karaa in 48% shan daqiiqo iyo batari yar 600mAh ku dhufatey 68% laba daqiiqo.
Wixii la barbardhigo, Nexus Google ee phablet 6p ayaa in muddo ah batari 3,450mAh Apple ee iPhone 6S ayaa batari 1,715mAh a. Hadda deg-deg xukun, sida kuwa la isticmaalayo Qualcomm ee Quick Charge ama awoodda si degdeg ah ku amraya dhisay cusub USB-C isku xira qaadataa qiyaastii hal saac si buuxda ka qaadaan batteriga a smartphone badan.
xukun Quick bandhig batari 600mAh.
technology ayaa lagu soo bandhigay iyadoo la isticmaalayo bateriga in lagu rakibay galay smartphone a, laakiin taas isticmaali saxan standalone. Huawei filaysaa in ay awoodaan in ay si toos ah u dhexgalaan saxan galay casriga ah ee mustaqbalka dhow.
technology Battery ayaa Ree ka dambeeyay horumarka degdeg ah ku sameeyey xoogga processing iyo meelaha kale ee technology, noqday kor ugu weyn qabtay iyo dhibic xanuun aasaasiga ah ee dadka isticmaala smartphone.
Qayb ka mid ah dhibaatada ayaa waxay xadeynta ee kimistari ee batariga. Soo saaridda unugyada awood u tamar keydinta dheeraad ah si nabad ah oo kalsooni leh ayaa la xaqiijiyey adag.
Iyada oo farsamooyinka kala duwan ee xukun, oo ay ku jiraan xukun wireless iyo xukun dhakhso, ayaa ka caawiyay dhigi sareesa si joogto ah kor u sahlan, abuuro beytari in muddo dheer hayaa inta u dhaxaysa eedeeyay weli waa himiladda ugu dambeeysa.
Maxaad batari phone aad waxyaalo dundumay
29343	0 Qodobka, Asia Pacific, Qalab, Japan, Telefoonada Mobile, News, Cilmi-baarista iyo horumarinta, Samuel Gibbs, Telefonada casriga ah, Technology, news World
← Sidee smart boorsooyinka gudbin safarka hawada Shan ka mid ah casriga ah jeebka yimaa-ugu wanaagsan →